अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँः पौडेल « Janata Samachar
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँः पौडेल
काठमाडौं । अर्थविद् डा.विजयकुमार पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको भन्दै त्यसलाई चलायमान गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आधार पत्रबारे मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा आफ्ना राय सुझाव प्रस्तुत गर्दै अर्थविद् डा. पौडेलले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र बिरामी छ यसलाई हिंडाल्नुपर्यो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जाने हो भने अर्थतन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सक्नुपर्यो ।’
त्यस्तै उहाँले योजना तयार गर्दा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । वर्ग विश्लेषण गर्न नसक्दा विगतमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै अर्थविद् डा.पौडेलले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्छ । कुन वर्गका लागि कुन विकास भनेर छुट्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै उहाँले समाजवाद उन्मुख नेपाली बजार अर्थतन्त्रको व्याख्या गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । डा. पौडेलले युवालाई विदेश जान नपर्ने, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिको उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादित कृषि उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने धेरैले रोजगारी पाउने भन्दै त्यतातर्फ सरकारको जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै शिक्षामा सुधार गरेर काम गर्नेलाई गरिखान दिने संस्कार लागू गरिनुपर्ने उहाँले भनाई छ । काम गर्नेलाई हतोत्साही नगर्ने हिसाबले सरकारले आफ्ना सबै क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने डा. पौडेलको सुझाव रहेको छ ।
भारतबाट फर्किएलगत्तै बिरामी पर्नुभएका उहाँमा स्वाथ्य समस्या आएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
टिपर दुर्घटनामा शिक्षक र चालककाे मृत्यु
मृतक दुवै एकैघरका दाजुभाइ भएको बताइएको छ ।
१८ वर्षीया किशाेरी बलात्कारकाे अभियाेगमा युवक पक्राउ
तामाङलाई १८ वर्षीया किशोरी बलात्कारको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।